श्री’मा’नले मेरा इ”च्छा पु’रा गरेनन्…..अब म के गरौँ ? – Sidha Post 24
महानगरीय प्र”ह”रीले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा खोलिएका केही क्याबिन रेस्टुराँ, मसाज र डा”’न्स बारबाट यौ’नज’न्य गतिविधिमा सं’लग्न भएको आरोपमा ४० जना म”हि”लालाई प”क्रा”उ गरेको रहेछ।
तीमध्ये ३५ जना विभिन्न उ”मे”रसमूहका म”हि”लालाई हनुमानढोका प्र”ह”रीले पुनस्स्थापनाका लागि रक्षा नेपालमा पठाएको थियो।उनीहरू लाई बुझी संस्थाको सेल्टरमा ल्याउन म आफैं गएकी थिएँ। उनीहरूलाई ल्याएपछि एकरएकजनासँग गो’प्य कुराकानी भयो मेरो। तीमध्ये अधिकांशको आआफ्नै दुस्ख थियो,
द’र्द थियो। सबै चि”न्ति”त अनुहारमा थिए। उनीहरू भन्दै थिए, ‘वै”क”ल्पि”क बाटो भइदिए हामी तुरुन्तै यो पेसा प”रि”व”र्त’न गर्न तयार छौं।’ तर एउटी अन्दाजी ४० देखि ४५ वर्षकी लाग्ने म”हि”लाको कुराकानी, उनको हाउभाउ र बोल्ने शैली बेग्लै थियो।
कुरा गर्ने पालो आएदेखि नै उनी मुख खु’म्च्याउँदै बोल्दै थिइन्। उनको भित्री कुरा सुन्दा म पनि छक्क परेँ। उनले मलाई यसो भनिन्, ‘तपाईं पत्याउनुहुन्न होला, म मारवाडी परिवारकी सदस्य हुँ। मेरो श्री”मान् ठू”लो व्यापारी छन्। उनी व्यापारकै
आफ्ना छोराछोरी कति कक्षामा पढिरहेका छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन। छोराछोरी र श्री”म”तीले जति मागे पनि पैसा दिन्छन् तर त्यो पैसा केमा खर्च भयो केही मतलब छैन। मेरो घरमा नपुग्दो केही छैन। नोकर, चाकर हीरामोती सुनचाँदी गाडी बैंक ब्यालेन्स सबै छ।
तर ती सबै कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ। ती भएर पनि मेरो शा’री’रिक आवश्यकता पूरा भएन। यो कुरा मेरो श्री”मान्ले बुझिदिएनन्। पैसाका लागि होइन, शा’रीरि’क आवश्यकता पूरा गर्न म’साज पार्लर खोलेकी हुँ मैले। त्यहाँ आउने ग्राहक चित्तबुझ्दो छन् भने
म आफैं यौ’ ‘नस’म्ब’न्धका लागि तयार हुन्छु। म यसैमा खुसी छु। यसमा अरूको टा’उको दु’ख्नुपर्ने किनर ? भिडियो यो पनि: नियमित स”म्ब”न्ध राख्ने म”हि”लाहरु यसरी चिनिन्छन् – म”हि”लाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको
लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ’न स”म्ब”न्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु म”हि”लाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन म”हि”लाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् ।
नेपालमा यस्तो गाउँ छ युवती बिहे गर्न नपाई बित्ने गर्छ जिन्दगी, हाम्रो गाउनी आउनुहोस भन्दै इ गाउका युवतिहरु